Fasaxa qarowga dilaaga ah ee Cancun ee 3 Dalxiisayaal Canadian ah
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Adventure » Fasaxa qarowga dilaaga ah ee Cancun ee 3 Dalxiisayaal Canadian ah
Saddex Kanadiyaan ah oo soo booqdey oo ku sugnaa Hoteles Xcaret Resort ee gobolka Cancun, Mexico, dhammaan fasaxoodii madadaalada ahaa ee loo dhan yahay waxay isu rogeen riyo halis ah.
Waxaan ku darnaa madadaalo loo dhan yahay ee All-Fun Inclusive ™, fikrad cusub oo dalxiis waara oo bixisa in ka badan 200 oo waayo-aragnimo ah. Tani waa tilmaanta ku taal Hoteles Xcaret website ee gobolka dalxiiska ee Playa del Carmen ee u dhow Cancun, Mexico.
Sida ay ku warameen warbaahinta maxaliga ah hal qof oo dalxiise ahaa maanta ayaa la dilay, labona waxay ku jiraan isbitaal deegaanka ah oo dhaawacyo halis ah ay ka soo gaareen rasaasta. Dadka dhintay ayaa ahaa dalxiisayaal Canadian ah oo ku sugnaa goobta loo dalxiiska tago
Xoghaynta Amniga ee Gobolka Quintana Roo ee dalka Mexico ayaa xaqiijisay in saddex dalxiisayaal ah ay ku dhaawacmeen toogasho ka dib. Dhanka kale, waxay u muuqataa in mid ka mid ah dhibanayaasha uu dhintay.
Tani waa dhacdo cusub oo rabshado ah oo ka dhacay gudaha dhismaha Hotel Xcaret.
Lo que les cuento en raadiyaha.
- Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 21, 2022
Bishii Nofeembar 4, eTurboNews ayaa sheegay in laba qof lagu toogtay oo lagu dilay agagaarka Hyat-maareeyaha dalxiis loo dhan yahay oo isla gobolka ah.
Ireland si ay u tirtirto inta badan xannibaadaha COVID-19 berrito
Daah-furka astaanta Dalxiiska ee cusub ee "Sahaminta Uganda" ayaa ka dhigaysa Dalxiiska Uganda iyo Afrika mid lagu faano
Madaxweynaha Peru ayaa joojiyay amarkii xiritaanka Lima
Maxaa ka cusub Bahamas bisha Maajo
Filimada la cuni karo iyo Isbeddellada Suuqa, Ganacsiga...
Qalabka Tijaabada Baadhista Baadhista Dhalashada Kahor Dhalashada Kahor ayaa ku dhacaysa...
Sidee Nevis ula yaabaa booqdayaasheeda?
Filibiin waa Dalxiiska Caafimaadka ee ugu dambeeya
Natiijooyinka tijaabada cusub ee bukaanada qaba...
Lufthansa waxay kordhisay qandaraasyada Guddiga Kormeerka ka hor ...
Caalamiga ah ee Steel Alxanka Suuqa Dhuumaha Si uu ugu Kordho A...
Lufthansa waxay hadda isku daraysaa xulashada duulista kaarboon-dhexdhexaadka ah ...
Sahan Cusub oo Maraykan ah si si Wanaagsan loogu Fahmo Kharashka Qarsoon ee...
200 oo qof ayaa laga daad gureeyay, qaar badana waa la dhigay isbitaal kadib markii...
Rihanna oo ku sugan Barbados iyada oo wadata boog ilmaheeda iyo Bikini
Maamulka iyo Ururada Bordeaux Wineries: Waxaa qoray...
Dabbaasha aadka u daran André Wiersig ayaa gaadhay Seychelles...
GVB Waxay siisaa $95K Inalåhan Mashruuca Calaamadaha Dijital ah ee Cusub
Ghana oo ah Xarunta cusub ee xalinta dhiirranaanta leh ee...
Falanqaynta Dalabka Suuqa Istacker, Qaybaha Muhiimka ah...
Wadajir. Wanagsan Ku Xidhan: Star Alliance ayaa jirsatay 25 jir
Shaqaalaha Barbados ee Sandals Resorts oo lagu sharfay Abaalmarino
FDA waxay ogolaatay Tijaabadii ugu horeysay ee COVID-19
Dhaqdhaqaaqa heshiiska ee dhinaca socdaalka iyo dalxiiska waxaa horumariyay...